DHAGEYSO:- Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
DHAGEYSO:- Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab?
August 12, 2017 at 15:34 DHAGEYSO:- Maxaa ka jira in ciidanka Abuu Mansuur ay dhaawaceen Amiir ku-xigeenka Al-shabaab?2017-08-12T15:34:43+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar mar kale AlShababa shalay ku qaaday aagga uu ku sugan yahay wadaadka gooni u goosadka ah Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Dagaalkii shalay oo ahaa mid xooggan ayaa la sheegayaa in maleeshiyada taabacsan Abuu Mansuur ay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab ku soo qaaday. Saraakiil ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo si dhow xaalada dagaalka ula socda ayaa sheegaya in maleeshiyada taabacsan Mukhtaar Roobow ay difaacyo adag ka sameysteen dhulka howdka iyo buuraha ee deegaanka Abal, taas oo u sahashay inay dib isaga riixaan Shabaabkii soo weeraray.
Warar madax bannaan, ayaa sheegaya in qayb ka mid ah maleeshiyada Shabaab, ay dib uga gurteen deegaankii lagu dagaalamay, markii uu lugta ka dhaawacmay Mahad Karataay, oo ururka dhexdiisa looga yeero Abuu C/raxmaan. Wasiir Xasan Eelaay, ayaa Jimcihii ku celiyay in mowqifka Dowladda Dhexe iyo kan Koonfur Galbeedba uu yahay in la soo dhaweeyo cid kasta oo ka tanaasusha fekerka khalafsan ee Shabaabnimada.
« Xaqiiqda ka dambeyso inay Shabaab weeraraan hoggaamiyahoodii hore ee Roobow Muqdisho
Senator Faroole oo iska casilay Xubinimada Guddiga Wadajirka Ee Dastuurka »